Ònye Bụ Jizọs Kraịst? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
ISI NKE ANỌ
7 Tụlee nanị ihe atụ abụọ. Nke mbụ, ihe karịrị afọ 700 tupu a mụọ onye ahụ e kwere ná nkwa, onye amụma bụ́ Maịka buru n’amụma na a ga-amụ ya na Betlehem, bụ́ obodo nta dị n’ala Judia. (Maịka 5:2) Ebee n’ezie ka a mụrụ Jizọs? Kpọmkwem, n’obodo ahụ! (Matiu 2:1, 3-9) Nke abụọ, ọtụtụ narị afọ tupu Mezaịa abịa, amụma ahụ e dekọrọ na Daniel 9:25 zoro aka n’afọ ahụ ọ gaje ịpụta kpọmkwem—29 nke O.A.* Mmezu nke amụma ndị a na ndị ọzọ na-egosi na Jizọs bụ Mezaịa ahụ e kwere ná nkwa.
8 Ihe àmà ọzọ na-egosi na Jizọs bụ Mezaịa ahụ bịara doo anya ná ngwụsị nke afọ 29 nke O.A. Ọ bụ n’afọ ahụ ka Jizọs gakwuuru Jọn Onye Na-eme Baptizim ka e mee ya baptizim n’Osimiri Jọdan. Jehova ekwewo nkwa inye Jọn ihe àmà ga-eme ka ọ mata Mezaịa ahụ. Jọn hụrụ ihe àmà ahụ mgbe e mere Jizọs baptizim. Lee ihe Bible na-ekwu merenụ: “Mgbe e mesịrị ya baptizim, Jizọs siri na mmiri ahụ pụta ozugbo; ma, lee! eluigwe meghere, o wee hụ ka mmụọ Chineke na-efedata dị ka nduru na-abịakwasị ya. Lee! E nwekwara olu sitere n’eluigwe nke sịrị: ‘Nke a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye m nwapụtaworo.’ ” (Matiu 3:16, 17) Mgbe ọ hụrụ ma nụ ihe ahụ merenụ, Jọn enweghị obi abụọ ọ bụla na ọ bụ Chineke zitere Jizọs. (Jọn 1:32-34) Mgbe a wụsara ya mmụọ Chineke, ma ọ bụ ike Ya nọ n’ọrụ, n’ụbọchị ahụ, Jizọs ghọrọ Mezaịa, ma ọ bụ Kraịst, bụ́ onye a họpụtara ịbụ Onye Ndú na Eze.—Aịsaịa 55:4.
11 Jizọs bụ Ọkpara Jehova hụrụ n’anya karịsịa—e nwekwara ezi ihe kpatara ya. A kpọrọ ya “onye e buru ụzọ mụọ n’ime ihe nile e kere eke,” n’ihi na ọ bụ ihe mbụ Chineke kere.# (Ndị Kọlọsi 1:15) Ọ dị ihe ọzọ mere Ọkpara a ji pụọ iche. Ọ bụ “ọkpara [a] mụrụ nanị ya.” (Jọn 3:16) Nke a pụtara na ọ bụ nanị Jizọs ka Chineke kere n’onwe ya. Ọ bụkwa nanị Jizọs ka Chineke ji mee ihe mgbe O kere ihe ndị ọzọ nile. (Ndị Kọlọsi 1:16) A kpọkwara Jizọs “Okwu ahụ.” (Jọn 1:14) Nke a na-agwa anyị na o kwuchiteere Chineke, ihe ịrụ ụka adịghị ya na o wegaara ụmụ ndị ọzọ nke Nna ahụ, ma ndị mmụọ ozi ma ndị mmadụ, ozi na ntụziaka.
12 Ọkpara ahụ e buru ụzọ mụọ na Chineke, ha hà nhata, dị ka ụfọdụ kweere? Nke ahụ abụghị ihe Bible na-akụzi. Dị ka anyị hụrụ na paragraf bu ụzọ, e kere Ọkpara ahụ eke. Mgbe ahụ, o doro anya na o nwere mmalite, ebe Jehova Chineke na-enweghị mmalite ma ọ bụ ọgwụgwụ. (Abụ Ọma 90:2) Ọ dịtụbeghị mgbe Ọkpara ahụ a mụrụ nanị ya chere echiche ịha ka Nna ya. Bible na-akụzi n’ụzọ doro anya na Nna ahụ ka Ọkpara ahụ ukwuu. (Jọn 14:28; 1 Ndị Kọrint 11:3) Ọ bụ nanị Jehova bụ “Chineke Nke pụrụ ime ihe nile.” (Jenesis 17:1) N’ihi ya, ọ dịghị onye ya na ya hà.%
* Iji nwetakwuo nkọwa nke amụma Daniel nke mezuru n’ebe Jizọs nọ, lee Ihe Odide Ntụkwasị.
# A na-akpọ Jehova Nna n’ihi na ọ bụ Onye Okike. (Aịsaịa 64:8) Ebe ọ bụ Chineke kere Jizọs, a na-akpọ Jizọs Ọkpara Chineke. N’otu aka ahụ kwa, a na-akpọ mmụọ ndị ọzọ e kere eke nakwa ọbụna nwoke ahụ bụ́ Adam ụmụ Chineke.—Job 1:6; Luk 3:38.
% Iji nwetakwuo ihe àmà na-egosi na Ọkpara ahụ e buru ụzọ mụọ na Chineke ahaghị nhata, lee Ihe Odide Ntụkwasị.
3. N’ihi gịnị ka o ji dị mkpa ka ị mara ihe ndị bụ́ eziokwu banyereJizọs?